192.168.8.1 - IHuawei
By Huawei I-5G eqhutywa yi-aerial kunye ne-algorithm ye-teknoloji, ukulandelelana kwe-Wi-Fi 6 kweemveliso zeHuawei AirEngine kunceda amashishini ukuba enze i-Wi-Fi 6 iinethiwekhi zithathe imingxunya yokugubungela, zinike iinkonzo ngaphandle kokulibaziseka, kwaye zingafumani kuphulukana nepakethe ngelixa uzula. Oku kuvumela indawo ezahlukeneyo, kunye nesikhululo seenqwelomoya sedijithali, imfundo yedijithali, utyalo-mali lwe-omni-channel, urhulumente okrelekrele, ukhathalelo lwempilo oluhle, kunye nokwenza ngobuchule, ukuya kwiminyaka yobudala bekhampasi engenazingcingo.
IHuawei ngumthengisi ophambili ukuhambisa iimveliso ze-Wi-Fi 6 kwaye uzifake kusetyenziso lweshishini. Kude kube ngumhla, ii-Wi-Fi 6 ze-Huawei AirEngine APs zisetyenziswe kwiindawo ezi-5 kwihlabathi liphela.
Njengomboneleli ophezulu wezixhobo zonxibelelwano, iHuawei inegalelo kwiindlela ezininzi zeLTE 4G kumnikezeli wenethiwekhi jikelele. Kwaye uninzi lwazo lufumana ukuma okuhle kubaxhasi bokugqibela ngokomgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuzinzileyo. Ngomgangatho wexabiso lokusebenza, i4G imizila engenazingcingo zeHuawei ngeSIM khadi kunye ne-Ethernet port ijike yaziwa kuMbindi Mpuma, eAsia, eYurophu, kwiindawo zaseMelika naseAfrika. Ii4G zeHuawei Routers ezihamba phambili zithandwa ikakhulu kubaxumi ngenxa yobunjani obuphezulu bokuyila kunye noyilo lwefashini enesitayile kubungakanani bepokotho ukuze isetyenziswe.
Ngokwandiswa kwenethiwekhi ye-LTE engenazingcingo, iHuawei ide yanikezela ngendalo yeendlela zayo ze-LTE ukudibana netekhnoloji yeLTE Pro ePhambili ngokuhambelana nothungelwano olwahlukeneyo. Kwaye izizukulwana zamva nje zeendlela zeLTE zeHuawei zijika zikhula ngokuthe chu ngezinto ezinemfashini. Eyona nto ibaluleke kakhulu yi-LTE Huawei Router nge-Ethernet port kunye ne-SIM khadi slot okanye indawo eneefowuni ze-LTE ezibonelela ngokusebenza okuthembekileyo nokuzinzileyo kwabaxhasi bokugqibela.
Le ncwadi yesandla ibhekisa kwi-EchoLife HG520s umzila weHuawei, isaza kusebenza kuninzi lweerutha zeHuawei zizonke.
Yiya kwidilesi ye-IP kwiwindow yakutshanje.
Idilesi esemgangathweni yendlela yokumisela yi-192.168.1.1.
Cofa kwiSiseko kwiphaneli yesandla sasekhohlo.
Ngenisa idilesi evulekileyo ye-DNS kwiServer ye-DNS yamabanga aphantsi kunye nakwimimandla yeServer DNS yesibini, emva koko ucofe iqhosha lokuhambisa.
Qaphela nje useto lwangoku lwe-DNS ngaphambi kokutshintsha uvule i-DNS, ukuba unqwenela ukuphinda ujonge kuseto oludala ngesizathu esithile.
Nje ukuba uqwalasele useto lwe-DNS kwaye ucofe iqhosha lokungenisa, sicebisa kakhulu ukuba ucime i-DNS solver hoard kunye neebrawuza zewebhu ukuze uqinisekise ukuba useto lwakho lwamva lwe-DNS lusebenza kwangoko.
Amanyathelo esiKhokelo soqwalaselo
Ngena kuqwalaselo lwekhasi lewebhu le-Huawei ngokurekhoda le IP ilandelayo kwibhokisi ye-URL: 192.168.100.1. Ukungagqibeki kokungena ngu:
Inombolo yokuvula; webnkcom
Ukuhamba uye kwi-LAN> Uqwalaselo lweDHCP yeServer
Ukujonga 'ukwenza isiseko se-DHCP'
Ukujonga ukuvumela ukuhanjiswa kwe-DHCP L2
Fikelela kwiiseva ze-DNS:
Ukuze uqwalasele umzila we-OpenDNS, kucetyiswa kakhulu ukuba ucoce i-DNS resolutionver hoard kunye ne-cache yewebhu ukuze uqiniseke ukuba useto lwamva lwe-DNS lusebenza kwangoko. Ngapha koko, ukuba unedilesi ye-IP esebenzayo funda nje eli nqaku eliza kukuthatha ngendlela yokuhlaziya rhoqo idilesi ye-IP esebenzayo.
Ukutyelela nje: http://www.opendns.com/setupguide/#iziphumoVavanya useto lwe-DNS lwamva nje.